Croatia dalka ugu Yar Dad ahaan ee soo Gaara Final-ka Koobka Adduunka Abid, Rikoodh kasta oo laga Diiwaan Geliyay khasaarihii England
Monday, February 18th, 2019 - 18:57:30
Thursday July 12, 2018 - 09:40:05 in Wararka by
Juventus weeraryahankeeda Mario Mandzukic ayaa dhaliyay goolka Guusha ee suurageliyay xulkiisa, diidayna in Rajadii England ay ka laheyd soo Gaaridda kama Dambeysta Koobka Dunida 52 sano keddib ay sax noqoto.
Daqiiqaddii 109-aad ee Ciyaarta semi-finalka ah ayuuna dhaliyay goolkaas, keddib markii uu Madaxa kubad ugu soo celiyay Ivan Perisic.
England – oo joogtay Semi-finalkii ugu horreeyay ee Koobka Dunida tan iyo markii West Germany ay ku garaacday ciyaarihii '1990 – ciyaarihii ka dhacay Talyaaniga laguna garaacay rigooreyaal, Kieran Trippier ayaa dhaliyay Bulisiyoon 20-yaardi meel goosha u jirta uu ka tuuray daqiiqaddii 5-aad ee billowga Kulanka, balse Perisic ayaa bareejeeyay 68-daqiiqo markii la marayay.
Macallin Gareth Southgate – ayaa ka codsaday wiilashiisa in ay bandhiggooda sii xoojiyaan.
Croatia, ayaa hadda wajahaya xulka France kulanka final-ka ee ka dhacaya magaalaca Moscow Axadda soo socota.
Haddaba ciyaarta maxaa laga bartay?
·England ayaa laga ciribtiray semi-final-ka 4 ka mid ah 5-tii mar ee ay soo gaareen, waxayna khasaareen 4tii Semi-final ee ugu dambeeyay ee ay soo gaaraan - Euro 1968 oo ay la ciyaareen Yugoslavia, World Cup 1990 oo ay la kulmeen West Germany, Euro 1996 oo ay foodda is dareen Germany iyo World Cup 2018 oo uu reebay Croatia.
·Croatia ayaa usoo gudubtay Final-ka koobka dunida markeedii ugu horreysay Taariikhda 5 mar ayeyna tartankan kasoo muuqdeen guud ahaan.
·England ayaa Khasaartay 3 kulan oo Koob ay la ciyaareen Croatia tan iyo markii la xiray Millennium, waxayna khasaare kala kulmeen xulkan in ka badan xul kasta oo kale.
·Mandzukic goolkiisa Guusha wuxuu ahaa goolkii daqiiqadda ugu dambeysa looga dhaliyo xulka England ciyaar Koobka Dunida ah Abid - 108 daqiiqo, iyo 3 Ilbiriqsi.
·Trippier ayaa noqday laacibkii ugu horreeyay ee Bulisiyoon Toos ah u dhaliya xulka England kulan koobka Dunida ah tan iyo David Beckham Sanadkii 2006-dii midkii uu ka dhaliyay Ecuador.
·Perisic ayaa ku lug yeeshay 10 gool inta uu socday Tartankan ha ahaadaan Is-reereeb ama Ciyaaraha tooska ah ee xulka Croatia (6 gool ayuu dhaliyay, 4 kalena waa uu caawiyay), wuxuuna goolasha ugu badan kula biirayaa, Davor Suker (oo dhaliyay 9 gool, 1 kalena Caawiyay).
·Trippier goolkiisa ayaa dhashay 4 daqiiqo iyo 44 Ilbiriqsi, wuxuuna ahaa Goolkii ugu dhaqsaha badanaa ee la dhaliyo Semi-finalka Koobka Adduunka tan iyo 1958 markaas oo (Vava uu 2 daqiiqo uun Gool u dhaliyay Brazil kulankii ay wajaheen France).
·Croatia ayaa noqotay xulkii ugu horreeyay ee 3 kulan ciyaara 30-ka daqiiqo ee Ciyaaraha lagu Kordhiyo hal Sano Koobka Dunida, tan iyo England oo sidaas oo kale u ciyaartay 1990-kii.
·England ayaa dhalisay 9 gool oo Koroosyada fiican ah, 2018 koobka Adduunka ee ay ciyaareen – waana xulka ugu badan ee Sidaan ka sameeyay Koobka Dunida Sanad qura tan iyo 1966-kii.
·4 ka mid ah 5ta kulan ee Waqtiga Dheeriga ah la isla Aaday Koobka Dunida 2018 waxaa ciyaaray England ama Croatia (kulanka kale wuxuu ahaa Spain v Russia).